देशमा तीन तहको चुनाव भयो, वामपन्थीहरु जिते, लोकतन्त्रवादी गठवन्धन पराजित भयो भन्ने सामान्य तथ्य अहिलेको महत्वपूर्ण विषय होइन । चुनावमा को हार्यो वा को जित्यो भन्ने विषय प्रमुख होइन । अवको छ महिनापछि नेपालका जनताले देशको, प्रदेशको र स्थानीय तहको सर्वाधिकार आफनो हातमा लिइ सक्नेछन । त्यतिवेला, नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय विकासका लागि करोडौं–करोडको कोष स्थानीय तहको अधीन र नियन्त्रणमा हुनेछ । धारा, पानी, सडक र बत्ती जस्ता विकासका सामान्य पूर्वाधारहरु जस्ता सुविधा पाउनका लागि समेत हिजो कार्यालयको सामान्य प्रमुखले निर्णयगर्दा “नाईं र हुन्न” भन्ने जुन सामाजिक र प्रशासनिक परिस्थिति हुन्थ्यो त्यो अव रहने छैन । तर, यो त्यतिवेला मात्रै सम्भव छ जव नागरिकहरु आफना अधिकारका प्रति मात्रै होइन, त्यो भन्दा बढी कर्तव्यका प्रति जागरुक हुनेछन । जव उनीहरु हिजोको पीडक र दासत्वपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि सजग र सक्रिय हुनेछन । पध्दति वदलिदैमा त्यसैसंग पारम्परिक संस्कार वदलिने पक्कै होइन । तर, चेतनाको विस्तारले परिवर्तनलाई सघाउँछ । यतिवेला नेपाल परिवर्तनको पहिलो घुम्तीमा छ । पूर्ण परिवर्तनका लागि अझै धेरै यस्ता घुम्तीहरु पार गर्र्नै पर्दछ ।
डा. रबीन्द्र समीरले आफनो फेसबुकको भित्तामा लेख्दै स्थानीय तहमा सवारी लगायतका सुविधा जुटाउन हुन थालेको होडलाई नयाँ नयाँ राजाका लागि सुविधा जुटाउने होडको संज्ञा दिनु भएकोछ । नेपालमा सुविधाको बढदो चाहना र प्रवृत्तिका वारे डा. समीरको टिप्पणी केही कटाक्षपूर्ण भएपनि निकै राम्रो र सन्तुलित छ । अहिलेसम्म सुविधाहरुको खोजीले सताइएका जनता र देशको क्रन्दनका वारेमा डा.समीरको भनाइसंग असहमतिको कुनै कारण छैन । तर, अहिलेको परिवर्तन राजनीतिमा मात्रै होइन, सवैतिर आएको हो । हाम्रो सामाजिक चलन, आर्थिक व्यवहार र विकास गतिविधिमा अव हुने परिवर्तन सामान्य अवस्थामा मापनगर्न सकिने खालका हुने छैनन । देश संघीय संरचनामा गै सकेपछि पनि हामी पुरानै विरासतका कुरामा अल्झियौं भने निश्चय पनि परिवर्तन तमाशामा परिणत हुन्छ । देशमा एकअर्काले एकअर्कालाई विश्वासगर्ने सामान्य अवस्था पनि रहँदैन । अहिलेसम्म देश आफैले हाँकेको भ्रममा वाँची रहेका हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विकासको नाममा माखोपनि मारेका छैनन । अव पनि, त्यही अवस्था रहेको खण्डमा देश अराजक प्रवृत्तिको महाजालमा पर्नेछ । त्यसवेला को कता पर्नेछन ? को कता उभिनेछन ? कसैले भन्न सक्दैन ।
देशका विभिन्न स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र केन्द्रीय तहमा निर्वाचित जन प्रतिनिधि र दलहरुले देशको अवस्था अनुसार सुविधाको उपभोगगर्ने चाहनाराख्नु खराव कुरा होइन । तर, त्यस्तो सुविधा जनताका सामान्य सुविधा र आवश्यकताका मूल्यमा हुनुहुँदैन । कुनै नगर वा गाउँपालिकाले आफनो स्रोतको जायज उपयोग गरेर कार्यालयको क्षमता वढाउने काममा लगानी वढाउँछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । निर्वाचित जन–प्रतिनिधिहरुको सुविधाका साथै जनताले पाउने वा पाउनुपर्ने सेवा तिव्र गतिले वढनु पर्दछ भन्नेमा कसैको दुइ मत हुन सक्दैन । जन–प्रतिनिधिहरुले स्रोतको सुव्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहको विकास र आम्दानी दुवै वढाउन सक्दछन भने उनीहरु आपूmले प्रदान गरेको सेवा वापत निश्चित पारिश्रमिक लिन योग्य हुन्छन । पारदर्शी हिसावले कुनै काम हुन्छ भने त्यसमा जनता पनि सकारात्मक हुन्छन । जन–प्रतिनिधिको नाममा विभिन्न सुविधा असूल्ने तर जनताको समस्यामा अलिकति पनि चासो नदेखाउने भ्रष्टतन्त्रका संचालकहरुका वारेमा जनतालाई थाह छ । एक्काइशौं शताव्दीको यो समयमा कोही पनि आफनो वृहत्तर हितकाप्रति अज्ञानी रहन सक्दैन । नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँका सवै राजनीतिक दल र तिनका नेताले जनताको एजेण्डा वोक्न छाडेका छन । सत्ता स्वार्थमा अलमलिएका नेताहरुले जतिसुकै चाहेपनि अहिलेको जस्तो पथभ्रष्ट अवस्था धेरै लामो समय रहन पाउने छैन ।
अहिले नयाँ राजनीतिक संघीय व्यवस्था र त्यस अनुरुपको राजनीतिक परिस्थितिमा जान, सम्भवतः प्रक्रियागत अलमलले होला, निकै ढिलो भएको महसूस गरी रहेका छन जनताले । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सत्ता हस्तान्तरणको मनस्थितिमा देखिन्छ । यो मनस्थितिले कांग्रेसभित्रको हताशालाई प्रतिविम्वित गर्दछ । अहिले भएका चुनावहरुमा कांग्रेसले आफनो साख स्थापितगर्न सकेन । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि दोस्रो स्थानमा आएको दल अहिले तेस्रो स्थानमा झर्नु भनेको कम अपमानजनक परिस्थिति होइन । मोरंगमा स्वनामधन्य महिला नेता नोना कोइरालाको सुपुत्र शेखर कोइरालाको पराजय र कैलालीमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाकी अर्धांगिनी आरजू देउवाको हार यसको सानो उदाहरण होला । कांग्रेसका यस्ता धेरै नेता या त पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाका या पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाका कारणले हारेका छन । कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताहरु जव आफनै शीर्ष नेताका कारण चुनाव हार्दछन भने कसको के लाग्दछ ?
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले आफनो अस्थायी सत्ताको अवधि लम्व्याउनुको कुनै अर्थ छैन । यसले कांग्रेसलाई सत्तालोलुप दलको रुपमा चित्रण गर्नेलाई नै वल पुर्याउनेछ । वामपन्थी राष्ट्रपति, वामपन्थी प्रशासनका मूलीहरु, वामपन्थी नेताहरुको यो वहुतायतमा कांग्रेस किन अलमलिइ रहेको छ ? कसैसंग यसको जवाफ छैन । प्रधानमन्त्री देउवा किन अहिलेसम्मको आफनै चरित्रका विरुध्द कुर्सीमा जवर्जस्ती लादिएका छन ? कि उनको नयाँ राजनीतिक वंशको प्रारम्भ यहीबाट हुने हो ? यतिवेला के गुमाउन वाँकी छ कांग्रेसले ? यो समय कांग्रेसले भविष्यका लागि शक्ति–संग्रहको समय हुनुपर्ने हो ।
अघिल्लो साता, साथीहरु कृष्णमुरारी भण्डारी र चन्द्रशेखर कार्कीले “सदृश्य” का लागि नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिका निर्माता डा. रामशरण महतसंगवार्ता गरेका थिए । वार्तामा डा. महतले विना छलछाम, विना झिझक भनेका छन ः राजनीतिमा स्थायी त स्वार्थमात्र हुने रहेछ । जीवनको उत्तराध्र्दमा आएर डा. महतले सांकेतिक रुपमा भएपनि यति वोल्नु ठूलै कुरा हो । अव डा. महतले आपूmलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुतगर्दै सत्ता र स्वार्थको राजनीतिबाट विदा लिनु पर्दछ । नयाँ आउने नेतृत्वले धेरै त केहीगर्ने होइन, २०५२ सालदेखि लगातार अन्यायको शिकार भै रहेका कांग्रेसीहरुको मान मर्दन रोकेपनि ठूलै कुरा हुन्छ । नेपाली लोकतन्त्रका सर्वमान्य नेता गणेशमानका सुपुत्र प्रकाशमान सिंह यो पटक पुगनपुग आठसय भोटवढी ल्याएर पराजयबाट जोगिए । यो न उनको विजय हो, न उनी जन्मेका कुलको । यस्ता उदाहरण टिपे धेरै भेटिएलान ।
राजनीतिमा नयाँ मान्यता स्थापित हुन लागेको वेलामा कांग्रेस त्यसको जीवन्त साक्षी वन्न नपाउनु कांग्रेसीहरुका लागि दुखद कुरा हो । तर, जतिसुकै दुखद भएपनि अहिलेका लागि कांग्रेस पन्छिनु नै उत्तम हुनेछ ।